पोर्चुगलस्थित रोनाल्डोको घरमा चोरी
24 Nov 2020 | मंगलबार, ९ मंसिर, २०७७ | Edition : Nepal | UK | Australia
शुक्रबार, २३ असोज, २०७७
एजेन्सी । पोर्चुगिज स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको घरमा चोरी भएको छ । पोर्चुगलको मडेइरास्थित उनको घरमा शुक्रबार चोरी भएको हो ।
रोनाल्डोको ग्यारेजबाट घरमा प्रवेश गरेर चोरले केही बहुमुल्य सामान चोरेको संचारमाध्याममा उल्लेख छ । चोरले हस्ताक्षर गरिएको युभेन्ट्सको जर्सी साथै अन्य बहुमुल्य वस्तुहरु चोरेको बताइएको छ ।
घटनापछि प्रहरीले सिसिटिभी फुटेजमार्फत चोरको पहिचान गरिसकेको छ ।
मडेइरास्थित घरमा रोनाल्डो बिदा मनाउन आउने गरेका थिए । हाल यो घरमा रोनाल्डोकी आमा तथा भाई बस्दै आएका छन् ।
रोनाल्डो भने हाल राष्ट्रिय टिमसँग अभ्यास गरिरहेका छन् ।
मुस्ताङ्गको घरपझोङमा ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले मुस्ताङ्ग जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिकामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । योसँगै बैंकको शाखा कार्यालयको संख्या २६४ पुगेको छ । सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग
ओली प्रवृत्ति प्रतिगमन, कुशासन, अल्पविकासको मुख्य वाहक होः डा. भट्टराई
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अग्रगमनको मुख्य बाधक भएको बताएका छन् । सोमबार साँझ एक ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले ओली प्रवृत्ति प्रतिगम
नेकपालाई सत्ता चलाउने म्यान्डेट दिएकाले काँग्रेस विपक्षमै बस्ने नेता सिंहको भनाई
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काँग्रेस संसद्मा विपक्षी दलकै भूमिकामा बस्ने बताएका छन् । सत्य साई बाबाको ९५ औँ अवतरण दिवसका अवसरमा सोमबार शङ्खमुलमा आयोजित सत्य साई बाबा पार्
पोखरा । पोखरामा प्याराग्लाइडिङ उडान दुर्घटना भएको छ । उक्त दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् ।
पर्यटकको पर्खाइमा लुम्बिनी
धुलिखेलस्थित बलभद्र पार्क
एजेन्सी । अमला नेपालमा पाइने एक किसिमको रूख हो। यसलाई संस्कृतमा आमलकी भन्ने गरिन्छ। यसलाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
हरियो खुर्सानी खाँदा फाइदैफाइदा !
यी खानेकुरा खान सुरु गर्नुहोस्, आफै घट्छ पेटको बोसो
लण्डन । बेलायती औषधि निर्माता अस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले आफूले विकास गरिरहेको कोभिड–१९ को खोपले औसतमा ७० प्रतिशत मात्र सफल भएको जनाएको छ ।
भारतको एउटा गाउँका एक जनाबाहेक सबै कोरोना संक्रमित !